स्मार्ट आमाबाबु कसरी बन्ने ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
स्मार्ट आमाबाबु कसरी बन्ने ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
Published Date : 2020-04-27
एजेन्सी । हरेक दम्पत्तिको चाहना हुन्छ, स्मार्ट आमाबाबु भन्ने । तर समयको व्यस्तता र साना साना गल्तीका कारण आफूहरु बच्चाका लागि स्मार्ट बाबुआमा नभएको अनुभव हुने गर्दछ। यस्तो समस्या पछिल्लो समयका आमाबाबुमा बढी देखिने गरेको छ। आमाबाबु नै कामकाजी भएकाले पनि बच्चालाई समय दिन नसक्नु, बच्चाको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्नु जस्ता कुराले बच्चामा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ। त्यसैले बच्चाको स्वभाव पनि उग्र बन्दै जान्छ। बच्चालाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि आमाबाबुको ठूलो भूमिका रहन्छ। बच्चालाई ज्ञानी, संस्कारी र चलाख बनाउन सक्नु नै स्मार्ट आमाबाबु बन्नु हो। आज हामी तपाईलाई स्मार्ट आमाबाबु कसरी बन्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिदैछौँ।
स्मार्ट आमाबाबु बन्न ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
आजभोलि आमाबाबु नै कामकाजी भएकाले बच्चालाई धेरै समय दिन पाउँदैनन्। अझ बन्ने हो भने पुरुषको मामिलामा यो बढी देखिन्छ। तर यसो गर्दा बच्चामा एक्लोपना महशुस हुने गर्दछ। पुरुषले हप्तामा कम्सेकम एक दिन आफ्नो छुट्टीको बेला आफ्नो केही समय बच्चाहरु लागि पनि दिनुपर्छ भने आमाले बिहान बेलुका नै समय दिनु पर्दछ। समय भएको बेलामा बच्चासँग खेल्ने वा उसलाई कतै घुमाउन लग्नु पर्दछ।
सानो छदाँ देखि नै बच्चाहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको बानी बसाल्न सकेको खण्डमा जीवनभर बच्चाहरुमा स्वास्थ्यको महत्वको बारेमा बुझिन्छ । यसका लागि बच्चालाई मातापिताको सही मार्गदर्शकको आवश्यक पर्दछ । बिहान चाँडै उठ्ने, योग वा मर्निङ वाक, एक्सोसाइज र खेलमा बच्चाहरुमा उत्साह जगाउनु पर्छ ।
केही सीमा तय गर्नु
आफ्ना केही कुरा स्वयं आफुलाई पनि मन परेको हुँदैन र बच्चाहरुमा यस्ता केही बानी हुन्छ जुन तपाईलाई मन परेको हुँदैन । बच्चाको बानी मन परेन भन्दैमा बच्चाहरुलाई झपार्ने वा कुट्ने नगर्नुहोस् । केही कुरा बच्चालाई पनि तपाईंको कुरा मन परेको हुँदैन त्यसैले केही सिमा तय गरेर बच्चालाई मन नपरेको बानी तपाईले हटाउनुहोस् र तपाईलाई मन नपरेको बानी बच्चाबाट छुटाउनुहोस्।
बच्चाको कुरा सुन्नुहोस्
प्रेमको भाव सिकाउनुहोस्
माया, ममता र स्नेहले सबैको मन सजिलै जित्न सकिन्छ । बच्चाहरुको कोमल हृदयलाई जित्नको लागि जहिले पनि स्नेही भावले कुरा गर्नुहोस्। यसले बच्चाहरु सधै खुशी हुन्छ र बच्चाहरुलाई यो आभाष पनि दिनुपर्छ की तपाई उसलाई कति माया गर्नुहुन्छ। यसले बच्चा र आतापिता बीचको स्नेह पनि बढ्छ।